Shaqo Qodiskii Vineyard Haven Dhameystiray - Ellicott Dredges Blog
Dhowr bilood oo daahitaan ah kadib, labo mashruuc oo burbursan oo ka socda magaalada Tisbury ayaa ku dhow in la dhameystiro.
Guddoomiyaha guddiga Dredge Nevin Sayre ayaa Arbacadii sheegay in laga shaqeeyo albaabka laga galo Lake Tashmoo iyo galbeedka laga soo galo dekada Vineyard Haven ee horaantii bishan.
"Aad ayaan ugu qanacnay natiijooyinka," ayuu yidhi Mudane Sayre. Waxa uu sheegay in ciid la dhigay xeebta dadweynaha ee Tashmoo iyo waliba xeebta dadweynaha ee Grove avenue iyo Owen Little Way.
"Mar kale waxaan leenahay xeeb," ayuu yiri Mudane Sayre. Dhammaan aagga ku teedsan jidka weyn ee Grove waa ku qurux badan yahay socodka hadda. Waxaan horeyba u soo arkay dad lugeynaya oo barafka ku wareegaya halkaas, oo jir ahaan aadan horey u sameyn karin. ”
Mashaariicdii hareeraha waxaa lagu ansixiyay shirkii sanadlaha ahaa ee magaalada bishii Abriil ee la soo dhaafay, iyada oo lagu soo qaatay maqaal amaah ah $ 500,000 Harada Tashmoo ayaa sida caadiga ah la qodaa sanad kasta. Markii ugu dambeysay ee laga qodayo albaabka laga galo galbeedka ee dekeddu waxay ahayd 1997.
Shaqada ayaa loo qorsheeyay inay bilaabato dabayaaqada bisha May laakiin dib ayaa loo dhigay kadib markii qalabkii uu lahaa qandaraaslaha Barnstable Dredge uu jabay. Xilliga xagaaga kadib, Mudane Sayre wuxuu yiri, shaqadii ayaa dib loo riixay "sida ugu dambeysa ee suuragalka ah sidaa darteed waxay leedahay faa iidada ugu badan xagaaga soo socda."
Shaqada Tashmoo waxay bilaabatay bishii Diseembar. Xadhkaha dekeddu waxay raacday ciribtiisa oo qaadatay qiyaastii saddex toddobaad.
Mudane Sayre wuxuu sheegay inuusan wali ka helin biil Barnstable Dredge isla markaana uusan garaneyn tirada ciidda laga saaray. Wuxuu sheegay in uu rajaynayo in mashaariicda ay noqdaan kuwo miisaaniyadda ku jira, iyo in magaaladu ku badbaaday kharashaadka dejinta iyada oo la sameynayo Tashmoo iyo dekeda dib-u-soo-laabashada.
"Ma jirto wax muujinaya inay jiri doonaan wax lala yaabo," ayuu yidhi Mr. Sayre